သင့်ကို ဒုက္ခတွေသာပေးနိုင်တဲ့ အဆိပ်အတောက်ဆန်သော Friendship လက္ခဏာ (၁၀)ခု - Lifestyle Myanmar
သင့်ကို ဒုက္ခတွေသာပေးနိုင်တဲ့ အဆိပ်အတောက်ဆန်သော Friendship လက္ခဏာ (၁၀)ခု
Relationship တစ်ခုက ကြာလာလေလေ ပိုပြီးအဖိုးတန်လေ ဖြစ်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုက မျှတမှုမရှိတော့တဲ့အခါ ၊ သင့်သူငယ်ချင်းက ကိုယ်သူ့ကိုတန်ဖိုးထားသလောက် ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီး တန်ဖိုးမထားတဲ့အခါ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကောင်းက အားနည်းလာနိုင်သလို ပါဝင်ပတ်သတ်သူ နှစ်ယောက်လုံးအတွက် အလဟဿဖြစ်စေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေကို ရပ်တန့်ဖို့က ခက်ခဲသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံမှာ လုံးဝကို လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ စာဖတ်သူ မိန်းကလေးတွေအတွက် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းက အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ သင်ရဲ့ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေမှာ အနည်းဆုံး ဒီအရည်အချင်းအချို့ရှိကြောင်း သတိပြုမိပါက အဲဒီလူနဲ့ ဆက်ပြီး အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့လိုလား၊ မလိုဘူးလားဆိုတာကို စဉ်းစားရမယ့် အချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ သင်အောင်မြင်တဲ့အခါ သူမ မပျော်ပါဘူး
toxic friend တစ်ယောက်ကို သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအကြောင်း ပြောပြမယ်ဆိုရင် သူမရဲ့ ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုက ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ? သူမရဲ့ မအောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းကို ညည်းညူပြခြင်းဖြင့် အကြောင်းအရာကို ပြောင်းလဲပစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘဝမှာ ကောင်းတဲ့အရာတွေ ဖြစ်လာရင် သူမ ဂရုစိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် သင်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကို သူမကြိုက်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ် သင့်သူငယ်ချင်းဆီကနေ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို လက်ခံရရှိခြင်းက သင့်အားအပြစ်ရှိသလို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
၂။ သင့်မှာရည်းစားရှိနေရင် မနာလိုတဲ့ အပြုအမှုတွေ ပြုမူတတ်ပါတယ်
သူ့နဲ့အရင်မတွေ့ဘဲ အခြားသူတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တယ်ဆိုရင် သင့်သူငယ်ချင်းက သင့်ကို တွေ့ရလို့လည်း ပျော်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အရမ်းတွေ ဒေါသထွက်ပြီး ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် သူ့ကို မခေါ်ရကောင်းလားဆိုပြီး သင့်ကိုရန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ သူမဟာ သင့်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာ လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကို ခြေရာခံပြီး အခြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်နေရာကို သွားတယ်ဆိုရင် စိတ်ဆိုးလာပါလိမ့်မယ်။
၃။ သူမနဲ့ စကားပြောပြီးရင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သလို ခံစားရပါတယ်
ကျွန်မတို့ဟာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောပြီးနောက်ပိုင်း ပင်ပန်းသလို ခံစားရနိုင်တယ်၊ ခေါင်းကိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိမထားမိကြပါဘူး။ စိတ်ပညာရှင် Susan Heitler ကဒီအကြောင်းရင်းဟာ Psychosomatic ဖြစ်တယ်လို့ တွေးပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်ခန္ဓာ စနစ်တွေအားလုံးက ချိတ်ဆက်နေပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသက်မသာ ခံစားရခြင်းက ကျွန်မတို့ကို ကာယပိုင်းအရ ဆိုးရွားစေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားပြောပြီးလို့ သင်စိတ်မကောင်းကြောင်း သတိပြုမိပါက အရင်ကရော ဖြစ်ခဲ့ဖူးသလားဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ ရှိတယ်ဆိုရင် သူနဲ့အဆက်အဆံလုပ်တာ နားထားသင့်ပြီး တခါတရံသာ ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
၄။ တစ်ခါတစ်လေ သူမတစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်ထားသလို ခံစားရပါတယ်
ကိုယ်က အစစအရာရာ သူတို့ကို မျှဝေလေ့ရှိပေမယ့် တချို့အရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်သူငယ်ချင်းက မပြောပြချင်သလို ခံစားရတဲ့ မရှင်းမလင်း ခံစားချက်အချို့ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခံစားချက်၊ ပြဿနာတွေနဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သင့်သူငယ်ချင်းကို ပြောပြတာ ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ မကြာခင် သင့်မှာ ပြောဆိုဖို့ ဘာမှမရှိတော့ကြောင်း သင်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။
၅။ သူမက သင့်ရဲ့အပြုအမှု၊ ဆံပင်ပုံစံ၊ လက်သည်းနှင့် သင့်ရည်းစားကိုတောင် ကော်ပီယူပါတယ်
သူမက ဒါကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ (သို့) မသိစိတ်နဲ့ ပြုမှုပါလိမ့်မယ်၊ အချိန်တိုင်းတော့ သူမက မကောင်းဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သူမကသင့်ကို အရမ်းသဘောကျလို့ ၊ သင့်လို ဖြစ်ချင်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူမက သင်လမ်းလျှောက်ပုံတွေ၊ ပြောဆိုပုံ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ၊ မိတ်ကပ်နှင့် အခြားအရာတွေကို ပုံတူကူးနိုင်ပါတယ်။ လက်သည်းဒီဇိုင်းတောင် တူနေတာမျိုး၊ ရည်းစားတောင် တူနေတာမျိုး တွေ့ကောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သူမနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်ပိုင် စကားလုံးတွေနဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကိုတောင် သင်ကြားရပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ သူမအတွက် စွမ်းအင်နဲ့ လှုံ့ဆော်မှု ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူမကိုယ်တိုင်က အသစ်တစ်ခုခုကို ပြုလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမမှာ စိတ်ကူးစိတ်သန်း မရှိတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်နဲ့ သင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ဒီ relationship ကို သင်ဆက်ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
၆။ မူယာမာယာများလွန်းပြီး သူ့ ပြဿနာတွေအကြောင်းသာ ပြောတတ်ပါတယ်
သူ့ဘဝက ဘယ်လောက်ဆိုးရွားကြောင်း အမြဲတမ်း ပြောတတ်ပါတယ်။ သူမက “သူလောကဓံတွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတာပဲ၊ ဘယ်လောက်တောင် နာကျင်နေမလဲ”ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို ကြိုက်ပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင်တွေက အလွယ်တကူ စိတ်မကျေမနပ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ဘဝရဲ့အဆိုးဘက်ခြမ်းကိုသာ တွေ့မြင်ခြင်းက အာရုံကြောရာဂါ လက္ခဏာများဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
ဒီအရာက ဘာဖြစ်စေသလဲဆိုတော့ သင်အနေနဲ့ သူငယ်ချင်းကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ သူမပြောဆိုနိုင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကို ရွေးချယ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သင်ဟာ ကောင်းတဲ့အရာတွေကို လျစ်လျူရှုပြီး အဆိုးတွေကိုသာ မြင်တော့တာမျိုး အမူအကျင့်တူ လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။
၇။ အရာရာတိုင်းမှာ သင့်ထက်ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစားပြီး သင့်ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလို ခံစားရစေပါတယ်
“Sale ချလို့ရတဲ့ ငါ့ဖိနပ်ကိုကြည့်လိုက်. ဒေါ်လာ ၂၀ပဲရှိတယ်” လို့ သင်ပြောရင် သူမက “ငါက Gucci ဖိနပ်ပဲ စီးတာ၊ ဒါပေမယ့် နင့်ဟာလည်း အဆင်ပြေပါတယ်လို့” ပြန်တုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်သူငယ်ချင်းက သင့်ထက်ပိုကောင်းနေဖို့ အမြဲတမ်း စီမံခန့်ခွဲပါတယ်၊ ဒါက ဘာကိုဖြစ်စေသလဲဆိုတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က အမြဲတမ်း အနိုင်ရပြီး တစ်ယောက်ယောက်က ရှုံးနေရင် ဒီပြိုင်ပွဲတွေဟာ တန်းတူတယ်လို့ သင်ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၈။ သင့်ကို အသုံးချပါမယ်
တကယ်လို့ သူ့ကို ပိုက်ဆံချေးဖို့၊ သူ့ကို ဖုန်းခေါ်ဖို့၊ သူ့တိုက်ခန်း ပြန်ပြင်ဆင်ရာမှာ ကူညီပေးဖို့ ပုံမှန်တောင်းဆိုနေရင် ဒါက ဆိုးရွားတဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောသူတွေဟာ အခြားသူတွေကို မိမိပန်းတိုင်ရောက်ဖို့သာ အသုံးချတတ်ကြပါတယ်၊ ဒီအရာက ဘာကိုဖြစ်ပေါ်စေလဲဆိုတော့ သင်များများ ကူညီလေ မကြာခဏ တောင်းဆိုလာလေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒီအရာကို ရှောင်ရှားဖို့ ခေါင်းခါတတ်အောင် သင်ယူပါ။
၉။ သင့်ကို အကြံဉာဏ်အမှားတွေ ပေးလိမ့်မယ်
“သူ့ကို ထားခဲ့စမ်းပါ, နင် သူ့ကို မလိုပါဘူး” ဒါက သင့်ကောင်လေးနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသေးအမွှား ပြဿနာတွေအကြောင်း ပြောပြတဲ့အခါ toxic friend တစ်ယောက် တုံ့ပြန်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂရုစိုက်မှု အမျိုးအစားက သူမဟာ သင့်အချစ်ရေးကို မနာလိုဖြစ်နေကြောင်း ပြသပါတယ်။
တစ်နေ့နေ့မှာ သူမရဲ့အကြံပေးချက်တွေက အရမ်းဆိုးရွားတဲ့ အချိန် ရောက်လာပါလိမ့်မယ်၊( ဥပမာ- သင့်မှာ စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ အရမ်းပြည့်နှက်နေတဲ့အခါ) သင်လိုက်နာမိကောင်း လိုက်နာမိနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ သူမရည်းစားရသွားရင် သင့်ကို စွန့်ခွာသွားပါလိမ့်မယ်
သင့်သူငယ်ချင်းက ရည်းစားအသစ်ရလာပြီး မကြာခင်မှာ လူတိုင်းကို မေ့သွားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကို ဖုန်းခေါ်တာမျိုး၊ စာပြန်တာမျိုး မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရည်းစားနဲ့ ပြတ်သွားပြီးရင်တော့ သင့်ကိုဖုန်းဆက်ပြီး ရည်းစားနဲ့ ပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းကို မပြီးနိုင်မစီးနိုင် ပျင်းစရာကောင်းလောက်အောင် ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
ဒီအရာက ဘာကိုဖြစ်စေသလဲဆိုတော့ တကယ်လို့ သင်ဟာ သူမနဲ့ တိုက်ရိုက်စကားပြောဖို့ ကြိုးစားရင် သင်မနာလိုဖြစ်နေတာလို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ သင်လုပ်နိုင်တာက စောင့်ဆိုင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် သင့်ရဲ့ သည်းခံမှုက အကန့်အသတ်ရှိသင့်ပါတယ်။